Nwunye 30 Lite ga-abụ smartphone mbụ na HarmonyOS si Huawei | Gam akporosis
Huawei mechara gosipụta sistemụ arụmọrụ ya HarmonyOS maka smart igwe. Ọ bụ ezie na nke a bụ na mmepe ruo ogologo oge gara aga, ọ bịarutere naanị ụbọchị abụọ gara aga na ọsọ ọsọ n'ihi oke ihe nke ụlọ ọrụ Donald Trump tinyere ọnwa ole na ole gara aga, bụ nke veto azụmahịa bụ isi; Nke a gụnyere ọtụtụ nsogbu maka ndị na-emepụta China, na isi ihe mgbochi bụ mmachibido iwu maka gam akporo maka ekwentị ya n'ọdịnihu, ọ bụ ezie na ebulilarịrị nke a, yabụ ọ ga-enwe ike ịga n'ihu na-eji Google OS na njedebe ya ọzọ.
Anyị nwere ike ịmata HarmonyOS ma emesịa, ọ bụrụ na nsogbu Huawei agbanyebeghị. ike ekele maka njikọ nzuzo ya na China. Ma anyị nwere ya ebe a, ekwentị izizi nke nwere sistemụ nrụọrụ a agaghị ewe oge iji rute. N'ezie, n'ime izu ole na ole anyị ga - anata ya, ma, o doro anya, ọ ga - abụ Nwunye 30 Lite ụlọ ọrụ, ọnụ na nso nso a ulo oru dị ka Ihe ọhụrụ 5i Pro na China.
Na Septemba, a ga-eme ka Huawei Mate 30 Lite bụrụ onye ọrụ, ma ọ bụrụ na ihe niile emee ka atụ anya ya. Ya mere, HarmonyOS ga na-abata na mbụ ama na kwuru ọnwa, nke bụ nke na-esote, mgbe Nwunye 30 na Mate 30 Pro Ha ga-eji gam akporo Pee Q n'okpuru EMUI 10, ụdị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ nhazi ụlọ ọrụ nke ọ malitere n'oge na-adịbeghị anya.
Huawei Nwunye 30- Android 10 / EMUI 10
Huawei Mate 30 akwadoro gam akporo 10 / EMUI 10
Huawei Mate 30 Lite- HongMeng OS * (Chinesedị ndị China) Android 10 / EMUI 10
Mwepụta n'etiti Septemba# HuaweiMate30Series pic.twitter.com/hjnydT0gI8
- Teme (特米) (@ RODENT950) August 8, 2019
Ọ bụrụ n'ezie na Mate 30 Lite dabere na nova 5i Pro dị ka e kwuru, anyị ga-enweta ngwaọrụ nwere ihu igwe LCD 6.26-inch anụ ọhịa, chipset Kirin 810 na oghere gbapuru maka igwefoto selfie. Onye na-agba égbè dị n’azụ bụ 48 MP ma soro 8 MP ultra lens angle lens, igwefoto macro raara onwe ya nye na ihe omimi dị omimi. Batrị ọ na-eburu bụ 4,000 mAh na nkwado maka ịgba ụgwọ ngwa ngwa nke 20 watts.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nwunye 30 Lite ga-abụ Huawei mbụ na HarmonyOS
Huawei weputara ekwentị LCD ya na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo